कस्तो छ माधव नेपालको अवस्था ? टिचिङ हस्पिटलले दियो यस्तो जानकारी — Sanchar Kendra
कस्तो छ माधव नेपालको अवस्था ? टिचिङ हस्पिटलले दियो यस्तो जानकारी
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अस्पताल भर्ना आज ४ दिन भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि त्रि.वि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका नेपालको स्वास्थ्य अवस्था स्थीर छ । उनी अतिकति बोल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको अस्पतालले जनाएको छ ।
बुधवार साँझ अस्पताल भर्ना भएका नेपालको स्वास्थ्यमा अलिकति मात्र सुधार आएको छ । अध्यक्ष नेपाललाई ज्वरो र खोकीको समस्या देखिएपछि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि, शिक्षण अस्पतालमा बुधबार भर्ना गरी उपचारका क्रममा रहेका छन् ।
अध्यक्ष नेपाललाई केही दिनमै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दाससहितको टोली पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको उपचारमा संलग्न छ । उता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुन (अनन्त)को थाइल्याण्डमा उपचार भइरहेको छ ।
बैंककस्थित समितिभेज अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ । जण्डिसको उपचार गराईरहेका उनको कलेजो निकै कमजोर भएको छ । उनको कलेजोमा वंशानुगत समस्या छ । कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने विषयमा डाक्टरहरुले सल्लाह दिएका छन् ।
फ्लोअप नहुँदा स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएको डाक्टरहरुको भनाई उदृढ गर्दै उनको सचिवालयले जनाएको छ । उपचार निकै जटिल भएको बुझिएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यक्रर्तामा निरासा छाएको छ ।
नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि थाइल्याण्ड गएका पुनबारे कार्यकर्ता चिन्तित भएका हुन् ।